News | akki
News | Tag: akki
जब अक्षय कुमारलाई आफ्नै ससुराले पत्याएनन्
एजेन्सी । अक्षय कुमार आज बलिउडमा खानहरुलाई टक्कर दिने अभिनेताका रुपमा परिचीत छन् । तर, एक समय यस्तो पनि थियो जब उनी फिल्म खेल्नका लागि यताउता भौतारिरहेका थिए ।
अक्षय कुमारका यी फिल्महरुले गरे १०० करोडभन्दा बढीको कमाई
बलिउडका स्टार अभिनेता हुन् अक्षय कुमार । उनका फिल्महरुले प्राय लगानी उठाउने गर्थे । तर, पछिल्लो समय भने उनले अभिनय गरेका अधिंकाश फिल्महरु सुपरहिट रहेका छन् ।
फेरि यी अभिनेत्रीसँग के अक्षयले फिल्म खेल्लान् त ?
कुनै समय बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार र अभिनत्री प्रियंका चोपडाको अफयेरले बलिउड तताएको थियो । चर्चा निकै चुलिएपछि अक्षय कुमारकी श्रीमतीले प्रियंकासँग फिल्म नखेल्ने अक्षयलाई चेतावनी समेत दिएको हल्ला ब्यापक चलेको थियो ।
बलिउडका चर्चित कलाकारहरु जसले आफ्नो नाम परिवर्तन गरे
बलिउड–बलिउडमा आउनुपुर्व यी बलिउड कलाकारहरुको नाम अर्कै रहेको थियो । बलिउडमा आएपछि भने उनीहरुले नाम फेरेका थिए । बलिउडका चर्चित कमेडियन जोनी लिभरको असली नाम जोनी प्रकाशा हो । बलिउडमा आफ्नो करिअर जम्दै गएपछि उनले नाम गरिवर्तन गरेका थिए ।
रविनापछि शिल्पालाई यसरी धोका दिएका अक्षय कुमारले
अक्षय कुमार र शिल्पा सेट्टीको रोमान्सको कुनै समय मिडियामा ठुलै चर्चा हुने गथ्र्यो । फिल्म धड्कन पश्चात भने उनीहरुको सम्बन्ध एकाएक बिग्रिएको थियो । कारण टिवइकल खन्ना अक्षय कुमारको जीवनमा आउनु ।
बलिउडका चर्चित सेलिब्रिटीहरुको यस्तो छ असली नाम
बलिउड–बलिउडमा आउनुपुर्व यी बलिउड कलाकारहरुको नाम अर्कै रहेको थियो । बलिउडमा आएपछि भने उनीहरुले नाम फेरेका थिए । बलिउडका चर्चित कमेडियन जोनी लिभरको असली नाम जोनी प्रकाशा हो ।
किन सँगै काम गर्दैनन् शाहरुख खान र अक्षय कुमार ?
बलिउड इन्डस्ट्रीमा आयुस्मान खुराना र राजकुमार रावको बर्चस्व बढ्न थालेको छ । यी स्टारहरुको एकपछि अर्को फिल्म हिट भइराखेका छन भने बलिउडका खानका फिल्महरुलेभन्दा पनि बढी कमाइ गर्न सफल देखिएका छन् ।
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘२.०’ अनलाइनमा लिक भएपछि अक्षय कुमारले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्मका दमदार अभिनेता रजनीकान्तको फिल्म २.० लिक भएको छ । नोभेम्बर २९ मा रिलिज भएको केही घण्टा लगत्तै फिल्म लिक भएको हो ।